Sawirka muuqaalka gabay ee sawir qaade Chema Madoz | Abuurista khadka tooska ah
Sawirka gabayada ee Chema Madoz
Pablo Gonder | | Fanaaniin, Sawir, Dhiirrigelinta
Sawirka muuqaalka gabay ee sawir qaade Chema Madoz noo sheegayaa sheekooyin muuqaal ah oo ku saabsan walxaha iyo isticmaalkeeda suurtagalka ah ee ina tusaya adduunyada is barbar socda halka walxaha ay yihiin wax ka duwan laakiin isku mid ah, wax u gaar ah laakiin la xiriira walxaha kale ee la midka ah.
Waxaa loo tixgeliyaa sida aadkama imaan sawir qaadayaasha casriga ah, Sawir qaadahaan Madrid wuxuu na tusayaa a gabayo muuqaal iyo madow iyo caddaan ah meesha ay alaabtu ku yaalliin sheekooyin xariif ah. Baro a xaqiiqada barbar socota adigoon u baahnayn inaad adduunyada bedesho, ogaada dunida Madoz.
Chema Madoz waa sawir qaade loo tixgeliyo inuu yahay gabayaa muuqaal ah oo ina tusaya xaqiiq jirta kala duwan meesha shaygu maaha sida ay u muuqdaanWaxyaabaha fudud ee isku dhafan iyo wax laga beddelay waxay ina tusayaan wax aan meesha oolin laakiin taasi, haddii aan dareensanno, waxay ina tusaysaa khiyaanada sawirka.
Sawirkaan Madoz ayaa ina tusaya sheeko muuqaal ah oo udub dhexaad u ah qabashada waqtiga saxda ah, daruuraha la qabtay xilligan oo ka kooban sawirka geedka. Marka laga eego dhinaca garaafka, haddii aan xoogga saarno luqadda caagga ah ee sawir qaadista iyo waxa ay ka tarjumeyso, waxaan ogaanay sida xiriirkaas u dhexeeya labada shay horeyba wuu u jiray Sawirkan kahor, waxa kaliya ee isbadalaa waa daqiiqada saxda ah iyo aragtida toogashada. Sawirkani waa mid aad u xiiso badan oo xiiso leh maxaa yeelay Madoz wuxuu ka soo dhex saaray daaqad, wuxuu sugay daqiiqada saxda ah wuxuuna qaaday sawir sida daruurtu u dhaaftay geedka hortiisa.
Dhammaan Hadalka muuqaalka ee Madoz waxaa loo abuuray qaab analog ah. Jacayl la soo dhaafay iyo macaan ay bixiyaan farsamooyinkii la soo dhaafay ee sawir analog, wuxuu noo sheegayaa sheekooyin iyadoo la adeegsanayo walxo la beddelay gacanta iyada oo aan loo baahnayn farsamooyinka dhijitaalka ah.
La khiyaano muraayadda barta gaarka ahi waxay sheegi kartaa xaqiiqda ka duwan sawirka halkaasoo natiijada lagu gaarayo khiyaano ku dhowaad erotic ah laakiin aad u jilicsan. Sheekooyin madow iyo cadaan ah Taasi gudaha sixir bay sheegaan iyo male oo ku calaamadeeya masaafo cayiman oo xaqiiqda jirta, iyadoo la geynayo dhul kale oo ka duwan meeshii sawiradu waa gabayo saafi ah.
Halkan waxaan ku arki karnaa garaafyo qaar ka mid ah oo doonaya in ay galaan koonka Madoz shaqadiisa ku maamuus.
Waxaad la socon kartaa shaqadiisa shabakadaha waaweyn:
Documentary ku saabsan Chema Madoz
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sawirka gabayada ee Chema Madoz
Naqshaddan fikradeed ee Windows 10 waxay na siineysaa fikrad ah waxa mashruuca Neon noqon karo